Tournedos oo leh madow madow - VIP truffles
Waqtiga diyaarinta: 2 saacadood oo nasasho ah + 20 daqiiqo
Waqtiga karinta: 10 daqiiqo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay dadka 2
2 tartanka hilibka lo'da
15 ilaa 20 garaam oo ah taraafikada madow
20 cl oo kareemada dareeraha ah oo dhan
Fleur de sel oo leh truffle
200 garaam oo ah tagliatelle cusub
Laba saacadood ka hor cuntadaada, ku shub kareemka dareeraha ah, casiirka turjubaanka madow iyo xabadda madow ee la shiiday weel hawo-qaad ah. Ku keydi qaboojiyaha.
Inta hartay ee cuntada ayaa la sameeyaa waqtiga cuntada.
Karkari mug weyn oo biyo cusbo leh si aad u kariso baastada. Ku kari 5 daqiiqadood karkarinta ka dibna ka daadi.
Inta baastadu karinayso, kari kariimiyaasha ku kari digsi kulul oo saliid leh.
Marka koobabka la kariyo (sidaad jeceshahay), ku buuxi kareemka dareeraha oo dhan oo leh madow madow. Ha karkarin. Ku dar milix iyo basbaas.
Ku darso kulul baastada cusub waxaadna ku shubtaa suugada madow ee 'truffle'.
ubax cusbocasiirka shucaacaMilixda Guérande oo leh xamuultartameyaal madow oo xamuul ahmadow Périgord truffles
Maraqa madow ee truffle aperitif